Semalt: Indlela yokukhusela iiKhokhi Kwiphina isiphequluli ngaphandle kweeSayithi ezizithandayo
Uninzi lwamawebhusayithi zisebenzisa ii-cookies ukuhlaziya imisebenzi yabo yokubeka iliso. Kwamanye amaxesha, ii-cookie zinceda umntu opheqululayo ukuba abe nolwazi olunzulu lwe-intanethi. Ngokomzekelo, iwebhusayithi yokuhlawula isebenzisa ikhukhi ukukhusela abaxhasi babo kuma-cyber-criminals abathintela amaphasiwedi abo. Njengoko i cookies ibonakala yenza i-browsing experience ibe lula, kukho ezinye iimeko xa ungathanda ukuqeda ikhukhi kwi-browser yakho.
Kule nqaku ye-SEO, uJack Miller, ingcali ehamba phambili ye-10 (Semalt , uya kukufundisa indlela yokukhusela ikhukhi kwisiphequluli sakho - lampada da terra per esterno. Uyakukwazi kwakhona ukuba ungabandakanyi iiwebhsayithi ofuna ukuba nekhukhi esebenzayo.
Kutheni ufuna ukuvimbela ikhukhi
Icookie iifayile (encinci) apho iwebhusayithi ibeka kwikhompyuter yakho ukuphucula amava akho okukhangela. Le fayile igcina ulwazi malunga nalo mkhangeli kwaye ikunceda ekusebenziseni kwakho emva koko. Ngokomzekelo, iisayithi zinokugcina ulwazi apha njengezinto zakho kwiinqwelo, iiseshoni zokukhangela, kunye nemikhwa yokukhangela. Ezi fayile zinobungozi kwaye ziqhubeka nokuhlaziya ulwazi lwabo. Ngokufanayo, abahlaseli abanobungozi bangasebenzisa le nto ukuze baphumelele ukuhlaselwa kwabo. Ngokomzekelo, abantu baye bafumana iingxaki zabacuki ekulandeleni ukusetyenziswa kwabo kwiwebhusayithi ngaphandle kolwazi lwabo. Kwezinye iimeko, abantu banokufuna ukunciphisa ulwazi olufunwa ngabantu abasithathu ukuba baqokelele ngabo kule mizekelo emininzi, ukufunda indlela yokuvimba ikhukhi kunokubaluleka ukuze wenze ngokwezifiso imikhuba yokukhangela.
Esi sikhokelo, siza kusebenzisa ezinye iiphequluli eziqhelekileyo ukubonisa le nkqubo. Ezi zikhangeli ziquka Firefox, Chrome kunye ne-Intanethi Explorer. Kuzo zonke iimeko, kukho iindlela zemvelo zokwamkela nokukhusela ikhukhi..Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le nkqubo inokusebenza kwezinye iibrowser. Ukwahlukana kuphela kunokube yinkqubo yenqanawa yokuhlela ukuhluka. Akufanele ukhathazeke malunga nenkqubo yokusebenza oyisebenzisayo.
Kulo mkhangeli, kunokwenzeka ukulawula ii-cookies kwiiwebhusayithi ozivakashelayo. Ukuvimba ikhukhi, nqakraza isethingi (Gear) icon. Ngoko unako ukuya kwiinguqulelo]> Iinketho ze-Inthanethi> Ubumfihlo> Amasayithi. Ukusuka kweli nqanaba, unokusetha imenyu yobumfihlo yewebhusayithi ngokuzimela. Cofa phambili uze ukhangele inkinobho yokukhawuleza ukuba awufuni ukuqhubeka wongeza iiwebhusayithi ngesandla.
Lapha kukho ukulawula okunamandla okujonga izinto ezifana nekhukhi. Yiya kwindlela ongakhetha ngayo yobumfihlo. Kwimfihlo, imenyu yilahla. Chofoza ukwamkela okanye ungavumeli ii-cookie zenze iiwebhusayithi apha. Ungakwazi kwakhona ukusetha ukuziphatha kwe cookie kwisiphequluli sakho se-Firefox.
Kwi-Chrome, ungaya kwisethingi uze ukhethe izicwangciso eziphambili. Kwoluhlu olwandisiweyo, unqakraza izicwangciso zezinto zokuhamba uze uye kwicandelo "cookies". Nje ngezinye iiphequluli, unokulawula ii-cookies zakho kweli candelo.
Ukulawula ii-cookies kunomnye umntu. Ngokomzekelo, amanethiwekhi amanethiwekhi akakwazi ukukunika iintengiso ezihambelana. Kwamanye amaxesha, ufumana iipapups ezikhathazayo kunye neentengiso phakathi kwamaphepha. Kubalulekile ukubonisana nengcali ye-IT ukuba awukwazi into oyenzayo. Kukho imeko apho abantu baye bafumana imali yabo ye-akhawunti ye-PayPal yancediswa ngenxa yokuguqulwa kwama-cookies.